(FAALLO):- Ma dhab baa inay Ethiopia xanibtay Webiga Shabelle ? – Radio Dalsan FM 91.5 MHz | Warar Sugan | Somalia News
(FAALLO):- Ma dhab baa inay Ethiopia xanibtay Webiga Shabelle ?
On Mar 24, 2016 Last updated Mar 24, 2016
Xilli Jiilaal oo ay cimilladu aad u kulushahay ayaa lagu jiraa, waxayna dadka iyo duunyadda xilligan oo kale aad u isticmaalaan Biyaha oo qeyb ka ah Nolosha.
Laakiinse, dadka ku nool Jiinka Webiga Shabelle waxay baahi xooggan u qabaan Biyaha, waxaana guray Webiga oo ahayd isha ugu horreysa ee ay biyaha ka heli jireen.
Dadka iyo Duunyadda ku nool qeybo ka mid ah Goballadda Sh/hoose, Sh/dhexe iyo Hiiraan waxaa dhowrkii isbuuc ee la soo dhaafay la soo darsatay biyo la’aan, kadib, markii uu guray Webiga Shabelle ee dhex mara Goballadaasi
Dadka, Xoolaha iyo Beeraha ayeyna saamaysay biyo la’aanta Webiga Shabelle, waxaana Deegaanadaasi ka jira biyo la’aan, iyadoo la sheegay in Biyaha laga soo dhaamiyo Ceelala iyo Baraago ku yaallo Deegaano kale.
Qiimaha Fuustadda Biyaha ayaana la sheegayaa inay meelaha qaarkooda gaartay ilaa 200,000 oo Shillin, waana kharaj aysan wada awoodi karin qeybaha bulshadda ku tiirsanaa Biyaha Webiga ee lacag la’aanta u ahaa.
Dareenka Biyo la’aanta ka jirta Deegaanadaasi ayaa waxay ku soo beegantay, iyadoo bishan Maarso 22-da Caalamka oo idil looga dabaaldegay Maalinta Biyaha Adduunka
Haddaba waxaa isweydiin mudan waxa dhaliyey inuu guro Webiga Shabelle, oo asal ahaan biyahiisu ka soo hoobtaan dhulka Buuraha iyo Webiyadda ku yaalla Bariga Ethiopia.
Sababaha dhaliyey inay biyaha Webiga Shabelle yaraadaan ama guraan ayaa la sheegay inay u sabab tahay iyadoo Dowlad-degaaneedka Soomaalda Ethiopia haatan bilowday Mashruuc lagu xakamaynayo Biyaha Webiga ee u soo qulquli jirey Somalia,.
Madaxweynaha Maamul-deegaaneedka Kilinka Shanaad, Cabdi Maxamuud Cumar ayaa dhawaan ka shanqariyey in loo baahan yahay in laga faa’ideysto biyaha Webiga ee dayacnaanta ka muuqato, wuxuuna sheegay inay xanibeen biyihii webiga ee u qulquli jirey dhinaca Somalia.
Waxa kale oo uu tilmaamay inay muddo daraasaad ku hayeen arrintaasi, loona baahan yahay inay dadaka Deegaanka ka faa’ideystaan Biyaha Webiga oo ay ku tacbadaan dhul-beereedka.
Xaalladda haatan taagan ayaana u muuqata Khatar cusub oo ku soo fool leh dadka, duunyada iyo dhul-beereedka ku tiirsanaa Webiga Shabelle.
Xeeldheerayaasha ayaa rumeysan inay Dowladda Ethiopia ka fekerayso inay Biyo-xireen cusub dhisto, si loo xakameeyo Biyaha Webiyadda ee Somalia u soo orora.
Sidoo kale, Dowladda Federalka ayaa laga rajeynayaa inay Dowladda Dhexe ee Ethiopia iyo Maamulka Soomaalida Ethiopia kala hadlaan Qaddiyadda Webiga Shabelle oo ay ku tiirsan yihiin Beeraleyda iyo Dadweynaha deggan Jiinka Webigaas.
Haddii aysan Dowladda Federalka ka dhiidhinin arrintaasi , waxay taasi saamayn xooggan ku yeelan kartaa Malaayiin qof oo ku tiirsan Webiga Shabelle.
Si kastaba ha ahaatee, Tallaabada ay Dowladda Ethiopia ku dhaqaaqday ayaa lagu fasiri karaa isku-day kale o oay ku doonayso inay Somalia ka xayiraan biyaha Webiga, sida ay Ethiopia uga xayirtay dalalka Sudan iyo Masar isticmaalka qulqulka Webiga Niil ee ka soo faruurma Ethiopia.
Dhismaha Mashruuca Biyo-xireenka Dib-u-curashadda Ethiopia ayaa ah ubucda khilaafka Siyaasadda ee Dowladaha Ethiopia kala dhexeeyo Dowladaha Masar iyo Sudan.
(SAWIRO): Kulankii Ra’isul-wasaaraha iyo Odayaasha Dhaqanka ee Hiiraan.
DEG DEG: Laacibkii Xulka Holland Johan Cruyff oo geeriyooday